Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iinqwelomoya ezisuka eAlmaty zisiya eNew Delhi ngeAir Astana ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • Iindaba zaseKazakhstan • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
I-Air Astana ibonelela ngonxibelelwano lwabakhweli abahamba ukusuka eKyiv, eBishkek, e-Istanbul, eTbilisi naseBaku.
I-Air Astana iya kuphinda iqalise iinqwelomoya ukusuka eAlmaty ukuya New Delhi, ikomkhulu laseIndiya, ngomhla we-16 kaDisemba 2021, kunye neenkonzo ezintathu ngeveki eziqhutywa yi-Airbus A320 aircraft.
Ukuhamba ukusuka eAlmaty ngoLwesibini, ngooLwezine nangeMigqibelo kucwangciselwe i-07:50 kwaye ifike ngo. New Delhi ngo-11:10, ngenqwelomoya ebuyayo ngo-12:20 kwaye ifike eAlmaty ngo-16:40. Ngawo onke amaxesha asekhaya, kunye nexesha lokuhamba ngeenqwelo-moya ze-3 iiyure kunye nemizuzu engama-50 kwicala ngalinye.
Inzululwazi yasemoyeni inika unxibelelwano olulula lwabakhweli abahamba ukusuka eKyiv, eBishkek, eIstanbul, eTbilisi naseBaku.
Ulwazi Lohambo / IiMfuno zokuNgena
Bonke abakhweli abahamba ukuya New Delhi kuquka abantwana kufuneka bagcwalise kwisikhululo seenqwelomoya saseNew Delhi kwi-intanethi. Abagibeli abangaphezu kweminyaka emi-5 ubudala nabo kufuneka balayishe iziphumo zovavanyo lwe-PCR ngesiphumo esibi esifunyenwe kwiiyure ezingama-72 ngaphambi kokufika. Ngaphambi kokukhwela ekuhambeni kwaye kwakhona emva kokufika, abakhweli baya kuvavanywa kwinkqubo yovavanyo lwe-thermometric. Kwimeko yazo naziphi na iimpawu ze-coronavirus efunyenweyo, abakhweli baya kuthunyelwa kwiziko lonyango.
Abakhweli abangagonywanga okanye abangagonywanga inxenye kufuneka bathathe uvavanyo lwe-COVID-19 xa befika kwaye baluphinde ekupheleni kwexesha leentsuku ezisixhenxe zokuvalelwa ekhaya. Abakhweli abagonywe ngokupheleleyo baxolelwa kuvavanyo lwe-PCR xa befika kwaye behlala bodwa ekhaya.